Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan la wadaago faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan fidinta weyn ee barnaamijka McKnight ee Bartamaha Cimilada & Tamarta ee Bartamaha (MC&E). Sida madaxweyne Kate Wolford iyo gudoomiye ku xigeenka Debby Landesman ku dhawaaqay, gudiga agaasimayaashayadu waxay go’aansadeen inay labanlaabaan miisaaniyadda deeqda ee MC & E saddexda sano ee soo socota. Golaha ayaa sidoo kale ansixiyay hadaf barnaamij cusub: Tallaabo geesinimo leh ka qaado dhibaatada cimilada adoo si aad ah u gooya wasakheynta kaarboon-ga Karbaashka ee bartamaha-galbeed sannadka 2030.
Guddiga McKnight wuxuu ku qasbay ficil geesinimo leh by calaamadaha sii kordhaya ee ah in aan ku jirno xiisad cimilo, iyo is afgarad saynis oo caalami ah oo adduunkeenu haysto wax ka yar 11 sano si loo yareeyo wasaqowga si weyn looga hortago saamaynta ugu xun ee isbeddelka cimilada. Isbeddellada waaweyn, oo dhakhso loo sameeyo, ayaa lagama maarmaan ah.
Waan ognahay inaan horay ugu sii gudbi karno isbedelka isbedelka cimilada; horay ayaan u sameynay. 10-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan soo aragnay isbedel aad u weyn oo ka dhashay dhuxusha oo loo wareejinayo tamarta qorraxda ee nidaamka korantada gobolka. Isbedelkani ma ahaa mid lama huraan ah. Tabarucayaashayadu waxay horseedeen shaqo adag oo hal abuur leh oo wata ololeyaal istiraatiiji ah oo istiraatiiji ah iyo dhisme isbaheysi oo iskudhafan oo loogu talagalay siyaasada gobolka iyo dib u habeynta sharciga
Waxaan u baahanahay inaan u dabaaldegno isbeddelkaan, aan dardargelinno, oo aan ku ballaarinno waaxaha kale ee dhaqaalaha. Sanadihii aan ka shaqeynayay wax ka qabashada qalalaasaha cimilada, weligey ma dareemin deg deg ah — ama maan arkin fursad ka weyn — hadda.
“Iyada oo la eegayo sida degdegga ah ee loogu baahan yahay, su’aasha udub dhexaadka ah ee ku wargalinaysa deeqdeena waxay noqon doontaa sida loo yareeyo qiiqa gaaska cagaaran si dhaqsi ah sida ugu dhaqsaha badan ee suurta gal ah. —AIMEE WITTEMAN, XEERKA DHEXE & HIDDAHA HOOSE
Buundada Sawirka: Awoodda Diinta & Iftiimiyada ee Minnesota
Waxa la Filayo Marka Dambe
Sanadaha soo socda, istiraatiijiyadda deeq-lacageedka ee MC & E ayaa si qoto dheer u xoojin doonta diiradda saareysa goynta deg-degga wasakhaynta kaarboon ee ku taal Midwest. Anaga ahaan, juqraafi ahaan waxaa ka mid ah Minnesota, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, Wisconsin, iyo Missouri. In kasta oo aan qorsheynayno inaan ku sahamno fursadaha dhammaan gobolladaas, waxaa laga yaabaa inaanan maalgashi gobol kasta si dhakhso leh ugu bixin.
Dadaallo badan oo deegaanka ah ayaa leh iskaashiyo cimilo, laakiin marka loo eego deg-degga loo baahan yahay maanta, su’aasha udub-dhexaadka ah ee ku wargalinaysa deeq-bixintaydu waxay noqon doontaa sida loo yareyn karo qiiqa gaaska cagaaran si dhaqso ah sida ugu macquulsan ee gobolkayaga. Tanaga, taasi micnaheedu waa yareynta qulqulaya 45 boqolkiiba dhaqaalaha guud ahaan iyo 70 boqolkiiba waaxda korantada marka la gaaro 2030. Muddada dheer - illaa 2050 - waxay macnaheedu tahay yareynta qiiqa boqolkiiba 80 guud ahaan dhaqaalaha iyo gebi ahaanba baabi'inta qiiqa ka imanaya waaxda korantada.
Siyaabaha qaarkood, qaabkani wuxuu u eg yahay midka hadda jira, wuxuuna ku dhisnaanayaa annaga istiraatiijiyad cusboonaysiin waxaa la qabtay sanadkii 2017. Waxaan u baahanahay inaan soo saarno koronto la'aan wasaqowga kaarboon. Waxaan u baahanahay inaan ku hubinno guryaheena, ganacsiyadayada, iyo gaadiidkeena tamar nadiif ah, oo aan si hufan u qabanno. Waxaanuna u baahanahay inaanu kor ugu qaadno wasakhda sii hadhsan iyada oo loo marayo "harooyinka" kaarboonka dabiiciga ah "sida kaymaha iyo beero-xilliyeedka, oo aan sahamin karno karboonka wershadaha iyo waaxaha kale ee ay adag tahay in go'aan laga gaadho. Marka la soo koobo, goynta qotodheer waa lama huraan dhammaan waaxaha, waxaanna qorsheynaynaa inaan taageerno qaabkaas.
Siyaabo kale, shaqadan ayaa ka duwanaan doonta. Si dhaw ulajeeddooyinka hadafyada barnaamijka soo kordha ee diirada saara bulshada, Deeq-siinteenna waxaa ku jiri doona ballanqaad qoto dheer oo xagga sinnaanta iyo dhisidda dhaqdhaqaaqa dhaqamada kala duwan. Waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa sheeko awood leh iyo istiraatiijiyad istiraatiiji ah, oo ay weheliso ka qaybgal mideysan oo loo wada dhan yahay.
Waxaan garwaaqsan nahay in u wareegista cimilada-u adkeysiga cimilada iyo dhaqaalaha ka -arboon-ka-dhex-dhexaadku ay si weyn saameyn ugu yeelan doonto sida dadku ugu nool yihiin ugana shaqeeyaan magaalooyinka iyo magaalooyinka yaryar, iyo beeraha iyo dalallada qabaa'ilka dhexdooda. Waxaan aaminsanahay in inta badan xalka caqabadahaani ay ka dhexjiraan bulshada laftooda, iyo Waxaan rajeyneynaa inaan taageerno jaaliyadaha sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatada cimilada.
Waxaan sidoo kale aqoonsannahay in dadaalladan oo dhan ay u baahan yihiin is-hoosaysiin, tijaabooyin socda, milicsiga, iyo la-qabsashada. Maaddaama aan u gogol xaareyno ilo badan si aan u goyno wasakheynta kaarboonka inta lagu gudajiro bartamaha-galbeed, waxaan sii wadi doonnaa inaan wax ka baranno oo aan ku garab-galno deeq-bixiyeyaashayada muddada fog, annagoo sidoo kale sahaminno xiriirro iyo fursado cusub. Deeq-bixiyahayagu hadda wuxuu sii soconayaa ilaa dayrta 2020, markaas oo aan ku dhawaaqi doono tilmaamaha barnaamijka cusub.
McKnight wuxuu kaloo sii wadi doonaa ka go'naantiisa Saamaynta maalgashiga; maanta, mid ka mid ah sedexda doolar ee la maalgeliyey ayaa howlgalka la siiyaa. Waxaan qorsheyneynaa inaan sii wadno la shaqeynta kooxdayada saamaynta ku yeeleysa maalgashiga si aan u hubinno deeqdeena isla markaana aan hubinno in maalgashiyadu ay gaarsiiyaan saameyn aad u sarreysa xallinta xiisadda cimilada.
Kooxda MC&E waxay rajeynayaan inay si iskaashi leh ula shaqeeyaan dad karti iyo karti leh si ay u qaadaan tillaabo geesinimo leh, si weyn u jareen wasakhaynta kaarboonka, oo ay dhisaan isku-dheellitirnaan, dhaqaalaha ka-hortagga kaarboon ee dhiirrigelin doona kibirka dhammaan gobolkayaga. Intaas oo dhan, waxaan higsanaynaa mustaqbal mustaqbal ah oo dadku iyo meerahaagu ku barwaaqoobaan.
Mawduuca: Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest, Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah